အခြားထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - China Others Factory
ဒေါင်လိုက် ၀ တ်ဆင်သည့်အ ၀ တ်အစားများကိုဓါးသွားများသည်အပေါ်ဆုံးရထားလမ်းပေါ်တွင်ဒေါင်လိုက်ဆိုင်းထားခြင်းကြောင့်၎င်းနှင့်အရိပ်ရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုရရှိရန်ဘယ်ဘက်နှင့်ညာဘက်ကိုလွတ်လပ်စွာမှေးမှိန်သွားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကြော့ရှင်း။ တောက်ပသောလိုင်းများ။ သပ်ရပ်ပြီးတိကျသည်။ ဒေါင်လိုက်ဖွဲ့စည်းထားသည့်ဒေါင်လိုက်မျက်မမြင်များသည်ဒေါင်လိုက်အထည်များကို ၁၈၀ ဒီဂရီလှည့်နိုင်သည်။ ထိုမော်တာကိုမျက်မမြင်များအားစက်မှုဂီယာနည်းဖြင့်မှိန်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဒါဟာအလိုတော်မှာမိုးလုံလေလုံအလင်းညှိ, လေဝင်လေထွက်နှင့်ရိပ်၏ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်။
နူးညံ့သိမ်မွေ့သောဒေါင်လိုက်မျက်မမြင်ထည် Semi-blackout 100% Polyester
ဒေါင်လိုက် ၀ တ်ဆင်သည့်အ ၀ တ်အစားများကိုဓါးသွားများသည်အပေါ်ဆုံးရထားလမ်းပေါ်တွင်ဒေါင်လိုက်ဆိုင်းထားခြင်းကြောင့်၎င်းနှင့်အရိပ်ရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုရရှိရန်ဘယ်ဘက်နှင့်ညာဘက်ကိုလွတ်လပ်စွာမှေးမှိန်သွားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကြော့ရှင်း။ တောက်ပသောလိုင်းများ။ ဒေါင်လိုက်နှင့်ကျစ်လစ်ပြီးဒေါင်လိုက် ၀ တ်ဆင်သည့်အသံထည်သည်အသံကာကွယ်မှု၊ အပူကာကွယ်မှု၊ အစိုဓာတ်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်းနှင့်ခရမ်းလွန်ကာကွယ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်သည်။ သန့်ရှင်းရလွယ်ကူပြီးဘယ်တော့မှညှိုးနွမ်းပျက်စီးခြင်းမရှိ။ မိုးလုံလေလုံပတ်ဝန်းကျင်သဟဇာတစီစဉ်ပေးသည်။ နေရောင်ခြည်ကိုပိတ်ဆို့ရန်ဒေါင်လိုက်မျက်မမြင်ထည်ကိုပိတ်ထားလိုက်သောအခါလှပမှုနှင့်လက်တွေ့ကျမှုများကိုပေါင်းစပ်ပေးသည့်အပြင်ရှုခင်းကိုခံစားနိုင်ရန်ထောင့်ကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုရွေးချယ်ရန်စတိုင်များများစွာရှိသည်။ ကွန်ဖရင့်ခန်းများ၊ VIP အခန်းများ၊ ရုံးများ၊ ဆေးရုံများစသဖြင့်အများပြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
စမတ်အိမ်အတွက်အရည်အသွေးမြင့်ဒေါင်လိုက်မျက်မမြင်ထည် 100% Polyester
အပေါ်ဆုံးရထားပေါ်တွင်ဓါးသွားများကိုဒေါင်လိုက်ဆိုင်းထားသောကြောင့်ဒေါင်လိုက်မျက်မမြင်ထည်ကိုအမည်ပေးခဲ့သည်။ ဒေါင်လိုက်ဖွဲ့စည်းထားသည့်ဒေါင်လိုက်မျက်မမြင်များသည်ဒေါင်လိုက်အထည်များကို ၁၈၀ ဒီဂရီလှည့်နိုင်သည်။ ထိုမော်တာကိုမျက်မမြင်များအားစက်မှုဂီယာနည်းဖြင့်မှိန်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဒါဟာအလိုတော်မှာမိုးလုံလေလုံအလင်းညှိ, လေဝင်လေထွက်နှင့်ရိပ်၏ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ လျှပ်စစ်ဒေါင်လိုက်ကုလားကာသည်လက်တွေ့ကျမှု၊ အချိန်ကာလနှင့်အနုပညာခံစားမှုတို့ကိုတစ်ခုနှင့်တစ်ခုပေါင်းစပ်ထားသည်။ ၎င်း၏နွေးထွေးမှု၊ ကြော့ရှင်းမှုနှင့်ရက်ရောမှုတို့ကြောင့်၎င်းသည်ရုံးအဆောက်အအုံများ၊ အစိုးရအေဂျင်စီများနှင့်အများပြည်သူနေရာများအတွက်ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်လာသည်။
ရောင်စုံဒေါင်လိုက်အထည်အလိပ် ၁၀၀% Polyester ၈၉ မီလီမီတာရှိသည်
ဒေါင်လိုက် ၀ တ်ဆင်သည့်အ ၀ တ်အစားများကိုဓါးသွားများသည်အပေါ်ဆုံးရထားလမ်းပေါ်တွင်ဒေါင်လိုက်ဆိုင်းထားခြင်းကြောင့်၎င်းနှင့်အရိပ်ရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုရရှိရန်ဘယ်ဘက်နှင့်ညာဘက်ကိုလွတ်လပ်စွာမှေးမှိန်သွားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒေါင်လိုက် ၀ င်းဒိုးကိုပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းရေးကိုအောက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ဒေါင်လိုက်ကုလားကာများကိုပုံမှန်ထိန်းသိမ်းခြင်းတွင်သင်သည်ဖုန်မှုန့်များကိုဖယ်ရှားရန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောဖြီးသို့မဟုတ်အမွေးအတောင်ကိုသုံးနိုင်သည်။ ထို့အပြင်သင်သန့်ရှင်းရေးအတွက်ဖုန်စုပ်စက်ကိုလည်းသုံးနိုင်သည်၊ အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာပိုကောင်းသည်။
New Style ဒေါင်လိုက်မျက်မမြင်ထည် 100% Polyester နှင့် 127mm အကျယ်နှင့်အတူ
ဒေါင်လိုက် ၀ တ်ဆင်သည့်အ ၀ တ်အစားများကိုဓါးသွားများသည်အပေါ်ဆုံးရထားလမ်းပေါ်တွင်ဒေါင်လိုက်ဆိုင်းထားခြင်းကြောင့်၎င်းနှင့်အရိပ်ရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုရရှိရန်ဘယ်ဘက်နှင့်ညာဘက်ကိုလွတ်လပ်စွာမှေးမှိန်သွားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒေါင်လိုက် blinds ထည်၏အရည်အသွေးသည်အနာဂတ်အသုံးပြုမှုအတွက်ကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ဒေါင်လိုက်ကုလားကာကို ၀ ယ်သောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ဒေါင်လိုက် blinds ထည်၏အရည်အသွေးကိုအထူးဂရုပြုရမည်။ ဒေါင်လိုက် ၀ င်းဒိုး ၀ ယ်ရန်အတွက်အကြံဥာဏ်အချို့ကိုဒီမှာဖော်ပြထားပါတယ်။
1. အကယ်၍ ဝယ်ယူထားသည့်ဒေါင်လိုက်ကုလားကာထုတ်ကုန်သည်အလွန်ဆိုးရွားသောအနံ့ထွက်လျှင်၎င်းသည်ဒေါင်လိုက်ကုလားကာတွင် formaldehyde အကြွင်းအကျန်ရှိသည်ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းကို ၀ ယ်ရန်မထောက်ခံပါ။
ဒေါင်လိုက်ကုလားကာအရောင်ရွေးချယ်ပြီးနောက်ရေရှည်ဒေါင်လိုက်ကုလားကာကိုအသုံးပြုရန်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရန်အတွက်အကြံပြုသည်။ အလင်းရောင်ရှိသည့်ဒေါင်လိုက်ကုလားကာများသည်အနက်ရောင်ဒေါင်လိုက်ကုလားကာများထက် formaldehyde နှင့်အရောင်စွဲမှုနှုန်းများစွာနိမ့်ကျနိုင်သည်။
အရည်အသွေးအာမခံချက်ကိုခံနိုင်ရည်ဒေါင်လိုက်အထည် 100% Polyester Semi-Blackout
1. ဒေါင်လိုက်ကုလားကာအရောင်ကိုအခန်းတစ်ခန်းလုံး၏အရောင်နှင့်ညှိနှိုင်းသင့်သည်။ အကယ်၍ ပရိဘောဂများသည်စတိုင်မှောင်နေလျှင်ဒေါင်လိုက်ကုလားကာသည်အလင်းရောင်ရှိသောအချို့သောပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုသင့်သည်။
2. ဒေါင်လိုက်မျက်စိကန်းသောထည်စတိုင်သည်အတော်အတန်ရိုးရှင်းပြီးခေတ်သစ်၊ ရိုးရှင်းသောသို့မဟုတ်အမေရိကန်အလှဆင်ပစ္စည်းများအတွက်သင့်တော်သည်။ ကြမ်းပြင်မှမျက်နှာကျက်ပြတင်းပေါက်များနှင့်နေရာလွတ်တပ်ဆင်ရန်ပိုမိုသင့်တော်သည်။
ဒေါင်လိုက် ၀ တ်ဆင်သည့်အ ၀ တ်အစားများကိုဓါးသွားများသည်အပေါ်ဆုံးရထားလမ်းပေါ်တွင်ဒေါင်လိုက်ဆိုင်းထားခြင်းကြောင့်၎င်းနှင့်အရိပ်ရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုရရှိရန်ဘယ်ဘက်နှင့်ညာဘက်ကိုလွတ်လပ်စွာမှေးမှိန်သွားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကြော့ရှင်း။ တောက်ပသောလိုင်းများ။ ဒေါင်လိုက်နှင့်ကျစ်လစ်ပြီးဒေါင်လိုက် ၀ တ်ဆင်သည့်အသံထည်သည်အသံကာကွယ်မှု၊ အပူကာကွယ်မှု၊ အစိုဓာတ်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်းနှင့်ခရမ်းလွန်ကာကွယ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်သည်။ ခြောက်လတစ်ကြိမ်တွင်သန့်ရှင်းရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက်ဒေါင်လိုက်မျက်စိကန်းသောအ ၀ တ်အစားများကိုယူရန်လိုအပ်သည်။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရာတွင်အရောင်ချွတ်စက်၊ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ခြင်းနှင့်ခြောက်သွေ့ခြင်းများကိုမသုံးပါနှင့်။ ဒေါင်လိုက် blinds ထည်ကိုသဘာဝကျကျခြောက်သွေ့စေပါစေ၊ သို့မဟုတ်ပါကဒေါင်လိုက် blinds ထည်၏ဖွဲ့စည်းပုံပျက်စီးသွားလိမ့်မည်။
အိမ်သုံးစွမ်းအင်ထိရောက်သောအစင်းဆယ်လူလာ Shades အထည်
ဆယ်လူလာအရိပ်ထည်သည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာပြတင်းပေါက်အလှဆင်ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထူးခြားသောဒီဇိုင်းကလေကိုလေထဲတွင်သိုလှောင်ထားနိုင်ပြီး၎င်းသည်အတွင်းပိုင်းအပူချိန်ကိုထိန်းထားနိုင်ပြီးလေအေးပေးစက်အတွက်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကုန်ကျမှုကိုသက်သာစေသည်။ ၎င်း၏ခရမ်းလွန်ဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့်အပူကာကွယ်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်များသည်အိမ်သုံးပစ္စည်းများကိုထိရောက်စွာအကာအကွယ်ပေးသည်။ ကြိုးကိုအခေါင်းအောက်၌ဖုံးကွယ်ထားပြီးပြီးပြည့်စုံသောအသွင်အပြင်ရှိသည်။ ရိုးရာကုလားကာများထက်အသုံးပြုခြင်းသည်ပိုမိုရိုးရှင်းပြီးလက်တွေ့ကျသည်။
ဖောက်သည်အားလုံးအတွက်အခမဲ့နမူနာများကိုကျွန်ုပ်တို့သင်ပေးသည်။ အရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးနိုင်ပြီးအမိန့်မတိုင်မီအရောင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏အထည်များသည်အရောင်ကြွယ် ၀ ပြီးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖက်ရှင်ပုံစံကိုလိုက်လျှောက်သည်။
ကြိုးမဲ့ Top Down Bottom Honeycomb မျက်မမြင်အထည်ပိတ်ဆို့မှု
ပျားလပို့ကိုမျက်စိကန်းသောပျားလပို့ကိုဖွဲ့စည်းပုံအရလုပ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်“ ပျားလပို့” သည်ထူးခြားသောအတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်လေသည်“ ပျားလပို့” တွင်တည်ရှိပြီးအခြားကုလားကာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ မရသောစွမ်းအင်ချွေတာသည့်အားသာချက်များကိုပေါင်းထည့်သည်။ ထူးခြားသော“ ဆွန်းပျားလပို့” ဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်းသည်ပျားလပို့ကန်းသောစကရင်များ၏အတွင်းပိုင်းအပူချိန်ကိုထိန်းညှိပေးသည်၊ အပူ ပေး၍ အပူပေးသည်။ ဆောင်းရာသီတွင်နွေးထွေးမှုနှင့်နွေရာသီတွင်အေးမြမှုတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအလင်းထုတ်လွှတ်နိုင်သည့်အထည်များ၊ ပျားလပို့ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အရောင်များနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနည်းလမ်းများသည်ရွေးချယ်မှုများစွာကိုယူဆောင်ပေးပြီးအိမ်၏သက်တောင့်သက်သာကိုနှစ်ဆဖြစ်စေသည်။
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုမရရှိနိုင်အရည်အသွေးတိုက်ရိုက်စစ်ဆေးနှင့်အရောင်ကိုရွေးဖို့အဘို့အလည်းရရှိနိုင်သောအခမဲ့နမူနာကိုဆက်ကပ်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏အထည်များသည်အရောင်ကြွယ် ၀ ပြီးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖက်ရှင်ပုံစံကိုလိုက်လျှောက်သည်။
Double Cell ပျားလပို့ကိုမျက်မမြင်ထည် Semi-Blackout
ပျားလပို့ကိုမျက်စိကွယ်သောထည်သည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေး ၀ င်းဒိုးအလှဆင်ပစ္စည်းအမျိုးအစားသစ်ဖြစ်သည်။ ထူးခြားသောဒီဇိုင်းကလေကိုလေထဲတွင်သိုလှောင်ထားနိုင်ပြီး၎င်းသည်အတွင်းပိုင်းအပူချိန်ကိုထိန်းထားနိုင်ပြီးလေအေးပေးစက်အတွက်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကုန်ကျမှုကိုသက်သာစေသည်။ ၎င်းသည်ခက်ခဲသောရိုးရာအထည်ကုလားကာကိုရိုးရှင်းစေပြီးလူတို့အားမြန်ဆန်သောအရှိန်အဟုန်၊ အားသာချက်ကတော့ပျားလပို့ကိုမျက်စိကွယ်တာကိုပိတ်လိုက်တဲ့အခါပိတ်ဆို့ထားတဲ့ ၀ င်းဒိုးရဲ့အနေအထားကသေးငယ်တဲ့အတွက်၊ အိမ်ထဲမှာနေရာကျယ်ကျယ်ဖွင့်လို့ရတယ်။
တာရှည်ခံကြိုးမဲ့ Pleated Window မျက်မမြင်ထည်
pleated window blinds တွေကိုဥရောပမှာလူကြိုက်များတယ်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းတရုတ်နိုင်ငံသို့စတင်မိတ်ဆက်ပြီးနောက်၎င်းတို့ကိုအိမ်များ၊ အိမ်များနှင့်အိမ်များတွင်အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ အ ၀ တ်အထည်များသည်အမြဲတမ်းပူပြင်းသောပုံသဏ္shapedာန်ဖြင့်ပုံဖော်ထားသည်၊ ကြာရှည်ခံပြီးပုံပျက်ရန်မလွယ်ကူပါ။ ထို့ကြောင့် pleated window blinds fabric သည်ပုံသဏ္permanာန်အစဉ်အမြဲပျောက်သွားပြီးမူလပုံသဏ္loseာန်ကိုဆုံးရှုံးသွားမည်ကိုစိုးရိမ်ရန်မလိုပါ။ ထို့အပြင် pleated ၀ င်းဒိုးမျက်စိကန်းသောထည်များကိုသန့်ရှင်းစွာထိန်းသိမ်းခြင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးအမွေးဖုန်မှုန့်များသုံးရန်သို့မဟုတ်ဆံပင်အခြောက်ခံစက်သို့မဟုတ်လေဟာနယ်သန့်စင်စက်များကိုအသုံးပြုရန်သာလိုအပ်သည်။ အဲဒါကိုမဖယ်ရှားနှင့်ရေ၌ဆေးကြောပါ။
ရုံးခန်းအတွက်ပြုလုပ်ထားသည့် Elegant And Thermal Honeycomb မျက်မမြင်ထည်
အဆိုပါပျားလပို့ကိုမျက်စိကန်းသောထည်ပျားလပို့ကိုဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အညီလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းကိုလျှပ်စစ်ဓါတ်အားများပြတ်တောက်ခြင်းနှင့်တဝက်တောက်ပသောစီးရီးများခွဲခြားထားသည်။ Semi- မှေးမှိန်သောပျားလပို့က blinds ထည်သည်ပလက်စတစ်ရှပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော blinds ထည်၏ဒီဇိုင်းနှင့်လုပ်ဆောင်မှုနှင့်ကြော့ရှင်းမှုများကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဒါဟာအနီးကပ်ပြီးပြည့်စုံသောပြတင်းပေါက်အလှဆင်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ ပျားလပို့အမွှေးများသည်ကန့်လန့်ကာများ၏ဖြောင့်ခြင်းကြောင့်အမြင့်နှင့်အလေးချိန်များပြားလာခြင်းကြောင့်ချောသောကုလားကာ၏အားနည်းချက်ကိုကျော်လွှားနိုင်သဖြင့်မျက်စိကန်းသောကိုယ်သည်တသမတ်တည်းဖြစ်နေပြီးအရောင်ချောမွေ့သည်။